20 Kununurwa Munamato Kumisidzana Nakashata Nzvimbo | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 20 Kununurwa Munamato Kumisidzana Nakashata Nheyo
20 Kununurwa Munamato Kumisidzana Nakashata Nheyo
13 Asi wakapindura akati: Chinomera chimwe nechimwe Baba vangu vekudenga chavasina kusima chichadzurwa.
Muhupenyu, iyo mhando yezvinetso zvinouya kwauri zvinoenderana neyako hwaro. Chii chiri hwaro mune ino mamiriro? Nheyo inogona kutsanangurwa seyako midzi yekubereka, midzi yemadzitateguru ako kana dzinza rako. Wese munhu muhupenyu ane hwaro, asi hwaro hwese hunosiyana. Tine dzimwe nheyo dzakanaka, nheyo dzakaipa, yakaipa yakashandura nheyo dzakanaka kana yakanaka yakashanduka yakaipa nheyo. Nhasi tichange tichiita munamato wekudzikinura tichipesana nenheyo yakaipa, asi tisati tapinda mune izvi, ngatitarisei idzi nheyo.
Nheyo Yakanaka: Iyi ndiyo hwaro kana hwaro hwemunhu asina nzvimbo yekudyara yakaipa uye deposits. Munhu anonzi ane hwaro hwakanaka kana madzitateguru ake agara achishandira Mwari, uye vagara vachifambisa iwo hunhu kubva kune chimwe chizvarwa kuenda kune chimwe. Muenzaniso wakanaka wehwaro hwakanaka unoonekwa mubhuku raJeremia 35: 5-19, tinoona maRekabhi akateedzera tsika dzakanaka dzemadzitateguru akatendeka kuna Mwari uye akafadzwa navo uye akakumbira vana veIsreal kuti vadzidze kubva kwavari . Mundima 19, Mwari akataura makomborero mazhinji pamusoro pavo nekuti kana akatendeka. Ndiro hwaro hwakanaka.
Nheyo yakashata: Nheyo yakashata isimba rakashatiswa nekudyara kwakaipa nemhando dzese dzemadhimoni dzakaiswa. Munhu anonzi ane hwakaipa hwakaipa apo mutsara wemadzitateguru ake uzere nokunamata zvidhori uye marudzi ese emabasa emadhimoni. Munhu akadaro achazoda kununurwa kubva kumauto aya kana aberekwa patsva. Muenzaniso wehwaro wakashata mubhaibheri iro rakaipa hwaro hwaro Jerobhoamu Mambo wekutanga weIsreal mushure mekunge Mambo Rehobhoamu arasa madzinza gumi nemairi kwaari akaiswa mambo. Akaita zvakaipa zvamarudzi ose pamberi pameso aMwari namadzimambo ose eIsraeri, achimutevera asina kudzingiswa, kusvikira Israeri yaparadzwa chose navaAsiria. Ona 11 Madzimambo 2: 13, 2 Madzimambo 2:22, 52 Madzimambo 2:15.
Nheyo yakaipa Yakatendeuka Yakanaka. Izvi zvinonzi zvinoitika kana munhu akanunurwa kubva kune chakaipa hwaro. Izvi zvinogona kuitika kuburikidza neminamato kana kusangana naMwari. Enzaniso dzemuBhaibheri ndiJabez, 1 Makoronike 4: 9-10, Mwari vachishandura zita raAbrama kuva Abrahama, Genesi 17: 5, Mwari vachishandura zita raJakobho kuva Israeri, Genesi 32:28. Varume vese ava vane hwaro hwakaipa kusvika Mwari achinja ipapo destinees.
Nheyo Yakanaka Yakashandurwa Yakaipa: Apa ndipo apo mumwe munhu anotendera Dhiabhori kudyara zvakashata muhupenyu Hwake uye nekwavo. Ichi chakaipa chakaiswa inogona kuve dambudziko reruzhinji. Vazhinji vevanhu vakatanga zvakanaka muhupenyu asi neparutivi mutsetse uyu wakaisa kutuka kana kudzvara zvakashata kungave nezvavakaita kana nemunhu akaipa. Muenzaniso wakanaka weizvi mubhaibheri ndiGehazi muranda waErisha, 2 Madzimambo 5:27, Gehasi akaisa kutuka kuzhinji paupenyu Hwake nekuda kwekukara kwake. Chivi ndiyo nzira inokurumidza kuputsa nheyo yakanaka, munaEzekieri 18:24 bhaibheri rakati kana murume akarurama (hwaro hwakanaka) akatendeuka kubva pakururama kwavo, kuti atadze (hwakaipa hwakaipa) kururama kwavo hakugone kuvaponesa.
Zvino iwe une pamusoro wevhareji nzwisiso pane akasiyana hwaro, isu tichave tichinamata uyu mununuro munamato uchipesana neyakaipa hwaro, iyo nhau yakanaka ndeiyi, kunyangwe hazvo hwaro hwayo hwakaipa sei, Mwari anokwanisa kukununura kubva pairi nhasi. Paunenge uchiisa minamato iyi mukutenda, hauzombotamburi nekuda kwezvivi zvababa vako nekusingaperi muzita raJesu. Mwari akakununura kubva rima kubudikidza na Kristu vachakununura kubva kunhu hwese hwenhema hwakaipa muzita raJesu.
1. Zvese zvawakarongedzwa nasatani muhupenyu hwangu kuti undiparadze, O Ishe, zvibvisei nemoto, muzita raJesu.
2. Oh Lord my God, bvisa chero zvawadyarwa nasatan muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
3. Chese chakanaka chakaparadzwa nasatani muhupenyu hwangu, O ishe Mwari wangu, dzorera kwandiri nhasi, muzita raJesu.
4. Hondo yangu yemweya, yakabatana nehumambo hwaMwari, muzita raJesu.
5. Kusvibiswa kwese kuri muhupenyu hwangu hweMweya, kunatswa nemoto unoyera, muzita raJesu.
6.Mweya Wakachena, shanyira imba yerima yehupenyu hwangu uye mafambiro ako uye kuburitsa chero zvinhu zvisingadiwe, muzita raJesu.
7. Wese mweya wetsvina mune hwaro hwaro, ndisunungure nemoto uye ufe, muzita raJesu.
8. Yese nepfupi neyakareba projekiti yemuvengi muhupenyu hwangu, bviswa, muzita raJesu.
9. Nhengo dzose dzemuviri wangu, ndinokuchaja, usashandise kundiparadza, muzita raJesu.
10. Iwe nhengo dzomuviri wangu, ita moto, muzita raJesu.
11.Mweya wekunaka, tora kutonga kwehupenyu hwangu, muzita raJesu.
12. O Ishe, regai chipo chekuzarura chisimudzire ushumiro hwangu, muzita raJesu.
13. Mweya Mutsvene, isa maoko ako pandiri, muzita raJesu.
14. O Ishe, regai simba rekumuka riitise utsvene nekuchena mandiri, muzita raJesu.
15. Oh Lord, yega wanano yakaitirwa ini muhope iparadzwe, muzita raJesu.
16. Kuroora kwakaipa, uko kuri kuparadza hutsvene hwangu uye kuchena, kufa, muzita raJesu.
17. Imba yakaipa, iko kuparadza hushumiro hwangu uye kudaidza, kufa, muzita raJesu.
18. Simba rega rega, rakashandura hupenyu hwangu padivi-pasi, hwakaiswa nemoto, muzita raJesu.
19. Aiwa, Ishe Mwari wangu, rongaiwo mugumo wangu maererano nehurongwa hwenyu, muzita raJesu.
20. Oh Lord Mwari wangu, pwanyai simba rese rinoti handisi kuzadzisa zvandinoda kuita, muzita raJesu.
Previous nyaya30 Munamato for Supernatural Turnaround
inotevera30 Minamato Iipokana Nesimba Kusvikira Kuzadzikiswa Kwendiri
Emmanuel Olasehinde Chikunguru 23, 2020 At 9:44 am
Zvakakwirira zvinokurudzira, nyasha dzakawanda uye kuzodzwa kwakawanda muzita raJesu.
Onyegbule Ebuka Nyamavhuvhu 23, 2020 Na 5:25 pm
Munhu wa Mwari nyasha pamusoro pehupenyu hwako, 08108761336, ndapota ndinoda kuwana hukama nemi
Albert Owusu Gumiguru 26, 2020 Pa 5: 26 am
Kunamata Kunongedzera Kurwisa Kuuraya MuNigeria
30 Minamato yeMinamato Yekuzodzwa KwaPorofita